Shan Calaamadood Oo Aad Xadhiga Dabaynta Moobilka (Charger) Ee Asalka Ah (Original) Ku Garan Karto | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
Published: December 21, 2016, 3:09 am
(0) Comments Maalinba maalinta ka dambaysa waxaa dunida si aad ah ugu soo badanaya isticmaalka aaladaha tiknoolajiyadda ee sii casriga ah, gaar ahaan talefannada gacanta iyo aaladaha Tablets iyo iPad ka loo yaqaanno.
Qalabkani dhammaantood waxa ay ku shaqeeyaan koronto lagu cabbeeyo, mar kasta oo dabku ka dhammaado, sidaa awgeed kama maarmaan xadhiga korontada loo gelinayo ee afka qalaad ‘Charger’ lagu yidhaahdo.
Haddaba qalabkan oo dhowris badan u baahan ayaa marar badan u baahda qalab-dayactir oo lagu bedddelo hadba wixii ka xumaada, sida muraayadda oo jabtay, baytariga oo xumaada kuwooda baytarigu ka bixi karo iyo xadhiga dabka oo ah kan ugu muhiimsan uguna baahida badan.
Marka halkan la marayo ayaana ay dhibtu bilaabataa oo xadhkaha uu qofku hli karo, gaar ahaan dadka ku dhaqan dalkeenna iyo dalalka aanay shirkadaha waaweyni faracyada iyo meheradaha ku lahayn, ayaa inta badan ah xadho shirkado ganacsi oo aan ahayn tii lahayd talefanka ama Tablet ku ay soo sancaysay, badankoodu waa xadhko bilaa tayo ah oo muddo gaaban ku xumaada, ka sii daran ee waa xadhko dhaawac gaadhsiiya talefanka ama tablet ka.
Qormadan oo uu Kobciye.Com Afsoomaali u rogay wawxa aynu ku soo bandhigaynaa 5 calaamadood oo qofka xadhig dab oo talefanka gacanta ama aaladaha kale ee shirkadda SAMSUNG soo saarta ah, iibsanayaa uu ku kala garan karo xadhiga asalka ah iyo kan aan asalka ahayn.
1. Astaanta: Marka u horreysaba calaamadda shirkadda Samsung astaanta u ah oo ah isla magaceeda uun ayaa ay ku kala duwan yihiin xadhiga asalka ahee iyo ka aan ahayn. Astaanta shirkadda oo ah magaceeda SAMSUNG ayaa ku qoran khad la’ akhriyi karo oo aan khafiif ama rasiin dheeraad ah lahayn. Sidoo kale dhammaan xarfaha SAMSUNG ku qorani waa isku mid dhinaca dhumucdaiyo qoraalka. Haddii aad ku aragto khadka oo aad ugu badan, ama xuruufta oo khadku ka yara dareeray, asal ma’aha xadhigaasi, sidoo kale inta badan xadhkaha aan asalka ahayn, xarafka A ee ku jira SAMSUNG, oo inta badan aan la mid ahayn xuruufta kale, sida in u xarafkan madaxiisa sare uu khadu dareerayo iwm.
2. Calaamadda A+: Haddii aad meel uun ku aragto ereyga ah, ‘Made in China’ shiinaha ayaa lagu sameeyey oo labada dhinac dambe ee madaxa Charger ka ku qoran waxa aad ogaataa in aaun asal ahayn. Sidoo kale haddii aad qoraallada sawirrada ku yaalla madaxa dhabarkiisa aad ku dhex aragto xarafka A+ iska jir xadhigaasi asal ma’aha ee.
3. Ilkaha oo kala duwan: Madaxa xadhiga dabka ee Mobiilku waxa uu leeyahay labada ilig oo gala godka korontada, haddii aad u fiirsato waxaaad arkaysaa labada lugood / ilig qaybta aan birta ahayn ee caagga hoose ah, in ay ka buuran tahay qaybta sare, taas macnaheedu waa in lugtaas dabka gelaysaa aanay is wada le’ekayn, ee qaybta hoose leedahay geer inta ka hoosaysaa ka buuran tahay inta geerkaa ka sarraysa.
4. Birta gelaysa madaxa Charger ka ama kombiyuutarka (USP): Sida aynu la soconno xadhiga Samsung ee asalka ahi waxa uu ka kooban yahay laba qaybood oo ah madaxa iyo xadhiga, xadhigu waxa uu leeyahay laba madax oo kala yar oo midna uu ka galo Moobilka ama Tablet ka, midka kalaa madaxa Charger ka ama Kombiyuutarka oo ah halka loo yaqaanno USP, hadba ka lagu isticmaalayo.
Xadhiga aan asalka ahayn waxaa lagu yaqaannaa in madaxaa USP ee kombiyuutarka geli karaa uu leeyahay af dheer (Inta berta ah) oo marka uu Moobilka ama tablet ka galo qaybi weli bannaanka sii joogayso, waana caalamad muujinaysa in aanu asal ahayn sidoo kale waxa aad madaxaas qaybta caagga ah ee ka hoosaysa ku arkaysaa astaanta muujiaysa USP in ay aad u muuqato, si ka duwan ka asalka ah oo aan isaga sidaa u muujinayn xaradhka sawirkaasi.ka aad laba ama saddex jeer isticmaasho xadhiga dabka (Charger) si uu talefanka kuugu dabeeyo, haddii uu yahay xadhig aan asal ahayn, labadaa ama saddexdaa jeer kadib waxa aad ku arkaysaa kulayl aan caadi ahayn, taas oo uu kaga duwan yahay xadhiga asalka ah.
« Warbixinta Ka HoreysayILA QOSOL:- Sheeko Aad U Qosol Badan Hadana Xikmad Aad uFog Xambaarsan..	Warbixinta Xigto »SAWIRRO:- Qiso Gaaban Oo Cajiib ah Muxuu La Kulmay Ninkii hindiga Ahaa Ee Ku Noolaa Sacuudi Carabiya..	HADAAD ISTICMAASHO FACEBOOK HALKAAN KU REEB FIKIRKAAGA	Leave a Reply Cancel reply